Topnepalnews.com | एउटा नेता जापान छिर्न नपाउँदा किन यत्रो रोइलो ? प्रदिप पौडेल यस कारण जापान छिर्न पाएनन्
एउटा नेता जापान छिर्न नपाउँदा किन यत्रो रोइलो ? प्रदिप पौडेल यस कारण जापान छिर्न पाएनन्
Posted on: September 17, 2017 | views: 3965
काँग्रेस नेताद्धय धनराज गुरूङ र प्रदिप पौडेल शनिवार १ बजेर ४३ मिनेटमा हानेदा बिमानस्थलमा ओर्लने समय थियो । उनिसँगै अरु दुई जनापनि आउँदैछन् भन्ने खवर थियो । काँग्रेस नेताहरु लिन पार्टीकै जनसम्पर्क समिति जाने त भइहाल्यो । हामी १३/१४ जना लिन गएका थियौं ।
बिमानबाट ओर्लेर बाहिर आउन बढीमा सामान्यतया १ घण्टा लाग्ने गर्छ । धनराज गुरूङसँग रातो पासपोर्ट भएर उहाँ आधा घण्टा अलि बेरमा बाहिर आइहाले । उनिसँगै अर्का एकजना सँगै आएका पनि बाहिर निक्लिए ।
तर सोधपुछ गरिरहेको भनेको प्रदिप पौडेल र पत्रकार भनेर आएको अर्का एकजना अनिल न्यौपानेलाई अध्यागमनले छाडेनछ ।
धनराज गुरूङलाई 'हामी जाउँ उहाँहरु आउनुहुन्छ छाड्ने वित्तिकै हामी बुझिराख्छौं' भनेर भन्यौं । उहाँले 'मेरो प्यारो भाई नआई म जाँदै जान्न' भनेर हिँड्न मान्नुभएन । त्यसपछि हामी अहिले आउलान् कि एकछिनमा आउलान् कि भनेर कुर्न थाल्यौं ।
त्यहाँ भएका कतिले अध्यागमनले नछाडेपछि 'हामीले जापानी सांसद किनेका छौं अहिले छुटाउछौं, जसरीनि निकाल्छौं' भन्दै ठूला ठूला गफ पनि दिन भ्याए ।
कतिले 'एम्बेसीको डाइभर आएपछि गएर छुटाउँछ' भने । बिचरा डाइभरले के गर्न सक्थ्यो र ! अझ कतिले त 'दुतावासले भन्यो भने छाड्छ' भने । भएका र चिनेजती सबैलाई फोन हाने । धनराज गुरूङले पनि नेपालमा ठूला नेता देखी धेरैलाई फोेन गरे तर क-कसलाई गरे थाहा भएन ।
फेरी चारै जनालाई स्पोन्सर गरेका भनिएका रितेन्द्र गिरी अहिले नेपालमा रहेछन् । अध्यागमनले नेपाल फर्कन्छ भन्ने विश्वास नलागेर उनलाई जापानको नम्वरमा फोन गर्यो उठेनछ क्यार । अनि उनको श्रीमती जापानी छन् क्यार । उनले आएर छुटाछन् एकछिनमा भनेर हल्ला गर्न थाले । हल्लै हल्लामा राती साँडे सात बज्यो ।
कतैबाट केही नलाग्ने भएपछि फर्कियौं । धनराज गुरूङसँगै छिर्न पाएका अर्का एकजना डेन्टिस्ट चाहिं (नाम नखुलाउन आग्रह भएकाले) सिनागावामा तिर केटि साथी छ भन्दै उतै फोन गरेर हिँडिहाले । उनिचाहिँ हप्तादिनको लागि घुम्न आएको भन्दैथिए ।
पछि रातभर सम्पर्क गरिरह्यौं । तर अध्यागमनले विश्वास लाग्दो आधार नपाएपछि पौडेल र अर्का पत्रकार भन्ने न्यौपानेलाई फिर्ता पठाइदिन लागेको अबेर राती थाहा पायौं । बिहान ९ बजे उहाँहरु हंगकँग पुगेको उहाँहरुले नै खवर गर्नुभयो ।
बिमानस्थलबाटै अध्यागमनले हिजो दुई जना नेपाली विद्यार्थीलाई समेत नेपाल फिर्ता पठाएको छ । एउटै जहाँजमा आएका ती विद्यार्थीबारे मैले बुझ्न त पाइन । तर उनिहरुलाई लिन गएका मान्छेहरुले दिएको जानकारी अनि भित्र समेत आइसकेको हामीले बुझेका ती दुईजना विद्यार्थी चाहिं के कारणले फर्काइए न कसैले चासो दियो न बाहिर समाचार बन्यो । खाली नेता आएको र गएको समातेको मात्र समाचार आयो ।
बिमानस्थलमा उपस्थित व्यक्तिले दिएको जानकारी जस्ताको तस्तै
बाहिरि खवर र जनसम्पर्क समितिको भनाई
बाहिर खवरहरुमा जापानी अध्यागमनले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाइएका पौडेल र न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको तथा पौडेल समेत पत्रकारको रुपमा आएको लेखिएको पाइएको छ ।
तर जनसम्पर्क समिति जापानका अध्यक्ष डिपि कँडेलले टपनेपालन्युजडटकमसँगको सक्षिप्त कुराकानीमा भने-'पक्राउ, थुनेको, पत्रकार भनेर आएको केही होइन, उहाँहरुलाई स्पोन्सर गरेको व्यक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर अध्यागमनले सोधपुछ र सम्वन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्यो तर उसलाई विश्वास नलागेपछि नेपाल फर्काएको हो ।'
जानकारी अनुसार पत्रकारको रुपमा आएका अनिल न्यौपाने जो काँग्रेस नेता प्रतिप पौडेलसँगै जापान छिर्न नपाएर बिमानस्थलबाटै फर्काइए उनि स्वास्थ्यखबर तथा नेपाल लाइभ डिजिटल पत्रिकाका प्रकाशक रहेको बताइएको छ ।
स्मरणीय छ जापान आएका एमाले नेता देवी ज्ञवाली, तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीमा रहेका देवेन्द्र पौडेल तथा सीपी गजुरेल लगायतका नेताहरु घण्टौं जापानी अध्यागमनको नियन्त्रणमा परिसकेका छन् ।
जापान आउने भन्ने वित्तिकै पर्याप्त कागजात, जानकारी तथा सम्पर्क व्यक्तिबारे नबुझि आउँदा देशमा लोकप्रिय रहेका तथा चर्चीत व्यक्तिहरु समेत जापानी अध्यागमनको नियन्त्रण परिरहनु तथा नेपाल फर्काइंदा यसले जापानी प्रशासन तथा जापानमा रहेका नेपालीमा नकारात्मक सन्देश बढाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अझ पछिल्लो समय कलाकारको नाममा गैर व्यक्तिहरुलाई बोलाएर शरणार्थी बनाउने, केही महिना राखेर काममा लगाउने तथा तोकिएको भिषा भन्दा अन्य तिर सक्रिय रहेको पाइएपछि जापानमा कलाकारहरुको भिषा लाग्न समस्या हुन थालेको छ । यसको मारमा पछिल्लो तीज कार्यक्रममा बोलाइएका चर्चीत कलाकार सहित दर्जन बढी कलाकारको भिषा आवेदन अस्विकृत भएको थियो ।